Jona 1, 2010 amin'ny 8:02 am
I upgraded androany… fa plugin ankehitriny nitsahatra nandika.
Koa ahoana no asa traslating ny URL? tahaka ny dont hahita na inona na inona izany na miasa amin'ny.
Jona 1, 2010 amin'ny 8:28 am
Ny fandikan-teny URL maka ny faritra ny URL izay translatable sy miezaka ny handika azy ireo sy miverina, nivoaka dia rehefa noforonina ny pejy, URLs rehetra dia misolo ny fandikan-teny, ary miverina, dia rehefa mangataka izany ny mpampiasa ny URL, plugin milaza WordPress izay pejy ny mpampiasa raha ny marina niresaka momba ny. tokony mba hahafahan'ny fanohanana azy ao amin'ny toe-javatra.
Aho, dia ho faly ny mijery ny antony intsony plugin mandika, fa mila URL mba hijery…
Rob Davies milaza
Jona 1, 2010 amin'ny 8:06 am
Translation of URL ny!!- Efa nijery manodidina ny translation plugin izay tena useable sy ny amin'izao fotoana izao (ny andro hamoaka fandikan-teny ny URL dikan) I tonga manerana ny plugin – Misaotra indrindra!
Efa nanan-mijery izany ary miasa lehibe – tsara lavitra noho ny zavatra ao an ao.
Ny zavatra Tena toy momba izany dia:
– Url fandikan-teny
– ao amin'ny pejy fanovana
– fanao foana ny toe-javatra toy izany koa Fikarohana
– Na dia adika amin'ny iray Seo rehetra Meta sy ny famaritana!
Fantastic – Misaotra anao…..
Jona 1, 2010 amin'ny 8:29 am
Misaotra ny mampamangy… Hevitra ho an'ny fanatsarana ho ankasitrahana
Jona 2, 2010 amin'ny 6:01 am
Misaotra noho io plugin. Upgraded aho androany izany vaovao Bible. Izany asa nampoizina. Fa misy ny sasany mihevitra aho fa diso kely.
Ny toerana misy anao fiteny ampiasaina eo an-tanako tranonkala dia Bahasa Indonesia. Rehefa avy Hanavao, Izany dia midika hoe ho teny Anglisy amin'ny frontend raha izany ao amin'ny Admin pejy tsy niova.
Miezaka aho mba hanao teny Anglisy ho toy ny toerana misy anao teny amin'ny Admin pejy Ary miasa. Avy eo dia, hanova izany miverina any Bahasa Indonesia, fa ny frontpage mbola maneho anglisy amin'ny alalan'ny toerana misy anao.
Hataoko tsy eo amin'izay ny fahadisoana marina. Mbola manara-maso aho izany raha manoratra izany. Angamba avy amin'ny navigateur cache, nefa tsy mieritreritra toy izany.
Misaotra anao na inona na inona fanampiana..
Jona 2, 2010 amin'ny 7:01 am
Aho mahita ny toerana in Bahasa, Angamba efa nanampy ny fiteny mamantatra endri-javatra izay nandefa anareo ho amin'ny teny anglisy pejy, dia ny URL miova amin'ny adiresy fisotroana?
Jona 2, 2010 amin'ny 7:08 am
Aho izao mahita fa ny mety ho olana amin'ny toerana misy anao teny, azafady manandrana manisaka ny Basha an-tampon'ny, Ary tokony hiova. raha tsy miasa, Anao aho hifandray mivantana
Jona 3, 2010 amin'ny 5:46 am
Voalohany, Te-hisaotra anao noho ny fanampianao, fa ankehitriny tsy misy fanampiana izany ny tranonkala intsony satria efa mihantona tsy misy fampilazana. Inona ny hevitrao?
Aza, Tsy midika izany noho ny plugin, fa mieritreritra fotsiny aho hoe nahoana ny miaramila mpizara Admin mihantona ny kaonty raha mandeha aho manamboatra ny vohikala satria fantatro misy fahoriana, ary izany no tsy Mariho koa. Tsy rariny izany, tsy izany?
Jona 2, 2010 amin'ny 8:19 am
Misaotra noho izany valin-fifadian-kanina. Izany ankehitriny Bahasa rehefa miova toerana misy anao teny anglisy. Raha ataoko eo amin'ny toerana misy anao teny Bahasa, Izany dia midika hoe maneho anglisy toy ny toerana misy anao.
Jona 4, 2010 amin'ny 1:36 am
Asa mahatahotra ny fandikana ny lahatsoratra URLs, fa”s tena mora raisina ary hanampy indrindra amin'ny SEO. Ahoana anefa ny pejy? I mahazo ny fahadisoana ', pejy tsy hita’ rehefa Tsindrio eo amin'ny pejy rohy izay efa nadika, lahatsoratra URLs dia tsara toy ny nolazaiko hoe:, izy ireo rehefa hita fa tsy nisy hadisoana. Nahoana no mitranga?
Jona 4, 2010 amin'ny 1:38 am
Zavatra iray hafa, rehefa mahazo ny 'pejy tsy hita’ fahadisoana, ny pejy reverts indray toerana misy anao fandikan-teny anglisy. Izany dia hanelingelina mpitsidika manana ny reselect ny teny indray, ny vahaolana ho lehibe. Misaotra
Jona 13, 2010 amin'ny 5:19 am
Ary tsy diso teny izany dia?
Jona 14, 2010 amin'ny 11:13 aho
Dia nihevitra izahay hoe raikitra izany 0.5.4 (nitranga izany ao amin'ny pejy izay nisy ohatra Hi (for hindi) in thier URL, Ary natao nadika) raha mbola mitranga, valio fotsiny amin'ny URL ho antsika mba hitsapana.
miala tsiny fa tsy mamaly taloha kokoa, ary godspeed
Jona 5, 2010 amin'ny 6:45 am
Parse fahadisoana: Misy diso ny raikipohy, tsy nampoizina $ farany amin'ny /home/****/public_html/starwallpaper.info/wp-content/plugins/google-sitemap-generator/sitemap-core.php amin'ny tsipika 2131
Update im plugin vaovao, ary Patch vaovao fa izay niseho. milaza amiko ny fomba hamahana azy io.
Jona 6, 2010 amin'ny 2:04 aho
Nahoana izy ireo avy ny filaminana ao amin'ny Admin ny gadget? Ary nahoana no tsy afaka amin'ny fandikan-teny tany am-boalohany ao amin'ny vaovao manova Version Malagasy Bible Society?
I nanandrana ny 0.3.4 Version ary niasa tsara teo ny gadget ao amin'ny Admin fa tsy mandika ihany koa.
Manantena aho fa amin'ny manaraka dikan efa diso ianao haka azy dia iza malalaka.
Na izany na kely fanampin-javatra tena tsara!
izany, fa aoka ny zava-drehetra ny asa tsy maintsy mampiasa ny 0.5.2 dika amin'ny lafiny, fa amin'ny gadget manoratra diso izany ho toy ny sary maneho izany.
Jona 6, 2010 amin'ny 12:07 am
Tsy azoko ny fanontaniana roa voalohany, koa miangavy azy ireo ary avereno lazaina amin'ny
Izaho koa tsy mahazo ny fahadisoany hitanao, Ny tsy mitady izay ho ao amin'ny fehezan-dalàna, na dia mety ho, no handeha, rehefa Transposh dia manan-kilema?
Jona 6, 2010 amin'ny 9:43 am
Ny teny anglisy no kely mahantra Mangataka anareo aho noho izany Miala tsiny aho.
Raha ny Transposh efa niova ho tsara ny zava-drehetra eny dia ny asa.
Ny fanontaniana voalohany dia: Nahoana ianareo no tsy miasa ny gadget ao amin'ny Admin ambonin'ny raha Transposh dia afaka?
Ny faharoa dia: Nahoana no Tsy afaka nandika ao amin'ny dikan-marika vaovao amin'ny 0.5.3 raha mampiasa fandikan-teny Ovay?
Tsy maintsy mampiasa 0.5.2 Version afaka mandika becouse aho izany.
Fa avy ny filaminana mbola ahy ny mamela toerana misy anao fandikan-teny teny sy iza no mahalala izany nefa inona no tsy workin.
Ve izany hadisoana mitranga amiko ihany no?
Jona 6, 2010 amin'ny 10:05 am
Manantena aho no nahazo izany marina izy amin'ity indray mitoraka ity
1. Tsy afaka izahay eo amin'ny Admin interface tsara, satria ho be loatra ny asa ho an'ny tombontsoa kely loatra, Aleotsika mampiasa vola ny fotoana hafa, (izay manantena) dia zava-dehibe kokoa ny endri-javatra
2. tsia, dia maminavina ny bibikely nandady tao ka, 0.5.4 fotsiny avy – masìna ianao, omeo azy ho try
Jona 6, 2010 amin'ny 10:50 am
niezaka 0.5.4 Version indrisy fa na inona na inona niova.
Jona 6, 2010 amin'ny 10:51 am
I nanandrana ny 0.5.4 dikan nefa indrisy na inona na inona ny niova.
Jona 7, 2010 amin'ny 7:35 aho
Misaotra anao noho izany plugin lehibe sady miala tsiny noho ny ratsy anglisy.
Manana olana amin'ny Transposh: raha nanisy lahatsoratra, tsy mandika teny.
Izany no rohy:
Misaotra anao na inona na inona fanampiana.
Jona 7, 2010 amin'ny 7:48 aho
Hitako fa ny toerana dia miasa, manindry ny saina fanovana ny samy hafa fiteny, ary hamita ilay fandikan-teny,
Tokony ho voafaritra tsara kokoa momba ny zavatra tsy miasa
Jona 7, 2010 amin'ny 8:04 aho
Ofer Misaotra noho ny valin- …
Rehefa manontany ny didy “Zavatra rehetra” Tsy afaka hamita izany.
Jona 7, 2010 amin'ny 8:09 aho
Izany didy izany miadana, mba tsy mamorona fifamoivoizana be loatra ny Google lohamilina. Azonao atao koa ny ho voasakana, manandrana mampiasa azy io amin'ny hafa: ip, na miandry fotsiny.
Jona 7, 2010 amin'ny 8:27 aho
Niezaka ny hanampy rohy hafa tsy miasa:
Dia aoka ny didy “Zavatra rehetra” mandritra ny alina tsy vita.
Toa ny plug-in vato.
Talohan'ny ny plug-in be haingana.
Jona 7, 2010 amin'ny 9:17 aho
Indray, ity asa rohy, Izaho dia manoro hevitra anao hiezaka hafa miditra avy amin'ny solosaina / navigateur. Ny fandikana rehetra niandry 5 segondra eo amin'ny andian-teny tsirairay fandikan-teny, raha tianao izany handeha haingana kokoa, dia afaka manova ny fehezan-dalàna
Ary raha mino ny toerana dia miadana kokoa, izany dia mety ho marina, fa ny fametrahana APC manampy be dia be
Jona 7, 2010 amin'ny 9:54 aho
Ofer Misaotra ny fanampiana …
Inona no atao hoe APC?
Jona 7, 2010 amin'ny 10:04 aho
Ny iray Mandehana mafimafy kokoa noho ny Fi, ary Transposh mampiasa azy io mba tsy banky angona fidirana
Jona 7, 2010 amin'ny 1:07 am
Jona 8, 2010 amin'ny 1:27 am
Aho mbola manana olana amin'ny Transposh.
Tsy afaka manao ny fandikan-teny.
Aiza I diso?
Misaotra noho ny fanampiana.
Jona 8, 2010 amin'ny 2:00 am
na io rohy:
Jona 9, 2010 amin'ny 8:33 aho
Na dia amin'izao fotoana izao toy izany:
I nanampy lahatsoratra vaovao ho an'ny WP Admin tontonana 2.9.2
voakitika “Refresh” mba hitahiry ny Post, Na izany aza, ny fandikana ny tondro ao amin'ny Transposh efajoro dia mihidy ary tsy mihetsika.
Rehefa mijery ny fandikan-teny avy amin'ny mpampiasa lafiny, ny lahatsoratra nadika fa tsy mitoetra ao am-boalohany teny.
I notsapaina tamin'ny navigateur hafa, fa mitondra tena Toy izany koa.
Misaotra anareo indray noho ny fanampiana.
Jona 13, 2010 amin'ny 6:45 am
Ary izany rehetra izany asa ….
Misaotra indray ny fanampiana sarobidy.
Jona 14, 2010 amin'ny 7:17 aho
fialan-tsiny, fa indray manidy ny olana.
Ny tondro in “efajoro Transposh” Voahidy izy ireo ary tsy mihetsika.
I voakitika ny bokotra “translate rehetra” Ary niezaka ny hanao ny fandikan-teny (Nampiasa ny alina).
Talohan'ny “mandika rehetra” Ny sazy no nadika 197624, rehefa 207311.
Fa tsy manao ny fandikan-teny intsony eo an-teny 'ny vaovao ary voasakana lahatsoratra.
Heveriko angamba ny bibikely.
Ankehitriny dia manantena ny hahita azy hiasa toy ny teo aloha ….
Jona 14, 2010 amin'ny 11:11 aho
Ianao no mandika be dia be ny sombintsombiny, angamba ny Google maotera mahita ny diso izany fomba. I Manoro hevitra avy amin'ny hafa miezaka solosaina / IP. Azo atao koa ny manao ny dingana amin'ny alalan'ny manova haingana ny mari-tomboky.
Rob Daves milaza
Jona 14, 2010 amin'ny 10:14 aho
Fotsiny fanontaniana roa / mety ho diso:
– indraindray ny URL tsy mandika araka ny tokony ho, misy fomba hanova izany ho toy ny permalinks naka ny untranslated lahatsoratra (ara-dalàna iray na ihany 2 teny ao amin'ny Url)? Vao nanana fijery hafa, ary mihevitra aho fa ny olana dia ny Title tsy ho nadika araka ny tokony ho (tahaka izao no lazain'i permalinks no mitsimpona) dia misy fomba iray mijery mialoha ny anaram-boninahitra toy ny miova permalinks rehefa avy mametraka dia fanaintainana. Koa indraindray doesnt handika ny catagory.
– Misy ihany ny manova ny pejy mari-tomboky (Famaritana ohatra Meta)
– na dia ny tsirairay pejy voatahiry any ho any ao amin'ny fampirimana ny mpizara mba azo ahitsy any?
Jona 14, 2010 amin'ny 11:09 aho
Ny indraindray dia rehefa ny URL tsy mbola nadika, raha afaka mandika ny lahatsoratra dia tokony hitranga fa haingana, ny handika rehetra koa miasa, na izany aza indrisy tsy mbola misy fomba mba hamaha izany fandikan-teny. Ho amin'ny hoavy ny sasany 😉
mahafinaritra koa mety ho ny mamorona 301 valiny raha ny URL dia tsy tena marina, Na izany aza izany dia ho sarotra Patch, ary isika dia tsy azo antoka isika, te-hampifantoka ny angovo any.
Ny famaritana Meta ihany koa raha adika, toy ny plugin Can amin'izao fotoana izao. Ny hevitra dia ny hoe amin'ny ho avy Ho hoavy dika isika hamorona ny interface tsara mba hampisehoana sombintsombiny rehetra izay misy eo amin'ny pejy, metas ahitana.
Tsy misy pejy voatahiry ao amin'ny lohamilina ho an'ny fanovana, fa afaka foana ny fandikan-teny vaovao farany latabatra mivantana, na dia Tsy fahazoan-dalana hidirana izany.
Jona 14, 2010 amin'ny 11:34 aho
Misaotra noho ny valin-. Afaka ny zava-misy izay amin'ny faran'ny .html mety hahatonga ny farany tsy mba handika teny? Koa rehefa avy nandika ny permalinks Tsy miova (rehefa avy fampiasana ho toy ny ohatra% lahatsoratra% ) Raha ataoko eo indray, ho famolavolana lalàna sy namoaka indray dia ity asa ity?
Koa ny gadget ho an'ny Transposh – raha azo atao ny eo amin'ny lohapejy toy ny tao an-tampon'ny everypage toy izany hatrany ny saina kely miseho ho toy ny lohapejy nihazakazaka nanerana ny tampon-pejy ho mora kokoa Fikarohana?
Raha tsy ny pejy pejy no fikarohana mahita izay voatahiry ao amin'ny fandikan-teny ary vakio ireo latabatra tahaka ny pejy?
Jona 14, 2010 amin'ny 11:44 aho
maro ny fanontaniana, eto ny sasany valiny:
1. eny, ny .html dia mety hanelingelina
2. miova izy ireo raha vao misy ny fandikan-teny ho azy ireo, reposting fotsiny ny ara-dalàna tsara ampy, fa handika rehetra angamba safidy tsaratsara kokoa anyhow
3. I mihevitra azo atao, dia mety tsy maintsy tweak ny fehezan-dalàna kely
4. Ny fandikan-teny be dia be pejy pejy toy ny WordPress pejy pejy, Toy izany, ny crawler paging eo amin 'ireo pejy dia mety pejy azy ireo ho toy ny pejy dia tokony ho mbola namadibadika
Jona 29, 2010 amin'ny 8:56 aho
Misaotra noho ny valin-. Vao avy nanao fanamarinana fanampiny ny sasany, ary misy olona maro 404 fahadisoana izay mitovy:
(URL) /singa / safidy,com_frontpage / Itemid,1/ihany,izany /
Efa nanampy ny tsy 404 Plugin hadisoana ary Manantena aho miasa.
Ihany koa aho nahazo olona maro sy ny dika mitovy lohateny famaritana Meta Tags – misy ihany manodidina ity?
Jona 29, 2010 amin'ny 9:35 aho
Ny olana dia rehefa Meta niasa tamin'ny, izany koa ny vokany raha mifanaraka nadika misy andian-teny iray eo amin'ny pejy, ny hoavy dika dia tsara kokoa hiatrehana izany.
Tsy mahazo ny 404 fahadisoana, izay tsy tokony hitranga, Fa raha tianao ny tena mahita azy aho, mila mahita ny URL izay mahatonga ratsy toy izany rohy
Jona 29, 2010 amin'ny 11:00 aho
Ny redirect plugin nanao ny fitaka toy ny 404 ny rehetra Redirecting ny voatendry pejy. Mba jereo kely http://www.calabria2010.com/calabria/component/option,com_weblinks/task,view/catid,922/id,21/lang,it/
ho ohatra ny pejy noforonina ary ankehitriny niova.
Ary ny Meta no mampiasa ny voalohany 160 teny tao amin'ilay lahatsoratra ho an'ny ny sombiny – Aho mampiasa zavatra rehetra izao amin'ny iray SEO izay toerana ny olana mety ho. Tsy mandika ny sasany indraindray, fa raha ny tokony ho izany tsy ny rehetra izany.
Manantena ny fanavaozana… mamerina ny fisaorana anao.
Novambra 25, 2010 amin'ny 6:06 am
Hi tiako ny plugin, nefa aho manana olana amin'ny pejy iray: dia nandika ny tsenan'ny tantsaha amin'ny ‘ sonia ny URL, ka heveriko fa miaro azy tsy miasa tsara…
Azonao atao ny mahita ny fahadisoana amin'ny fipihana eo amin'ny sainam-USA (ambony havanana zoro) ity rohy:
Any hevitra hataoko ahoana hamaha ity? Mety mikasika zavatra eo amin'ny banky angona na Transposh cache?
Novambra 25, 2010 amin'ny 7:03 am
Koa raha misy tonga manerana ny olana, tokony hanao fitsapana lahatsoratra miaraka amin'ny andian-teny ao anaty ny dika mitovy, hanana izany nadika sy hanitsy ny fandikan-teny mba haka ny apostrophe avy ao aminy, dia amboary ny URL ao amin'ny lahatsoratra nadika tany am-boalohany. Tsy tonga lafatra anefa, satria ny teny dia ho diso (nandao Tantsaha Market fa tsy ny Market Farmer) saingy ny maimaika.
Misaotra be dia be noho ny hevitra Ofer.